Faayilii - Humna raayyaa ittisaa Itoophiyaa
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambi Dolloo keessatti har’a humni raayyaa ittisa biyyaa baay’inaan magaalattii keessatti bobba’uu dhaan meeshaalee gurguddaan golee magaalattii adda addaa irra dhaabamee waan jiruuf sodaa keessa jirra jechuun jiraattonni dubbataa jiran. Meeshaa gurguddaa kan akka Martayyeesii mgaalattii keessa dhaabuu dhaan raayyaan waraana ittisa biyyaas meeshaa dhuunfaan qabatanii asiif achi sosso’uun akka waan dirree waraanaa jirruu nutti fakkeesse jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsaa jiran.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa magaalattii illee isuma kana mirkaneessan. Haala magaalattii keessatti mul’ataa jiru itti aanaa itti gaafatamaan waajjira nageenyaa fi bulchiinsaa godina Qellem wallaggaa obbo Tsegaye Waaqjiraa ennaa ibsan illee poolisiin Oromiyaa nageenya naannoo keenyaa eegsisuuf ga’aa dha jedhan.
Humna raayyaa ittisa biyyaa bobbaasu haalli yaaddessaa ta’es naannoo keenyatti mul’ataa hin jiru. Federaala irraa bobba’anii dhufan waan ta’eef nuti isa kana quba hin qabnu jedhan. Waan amma mul’ataa jirus magaalattiif waan haaraa waan ta’eef uummati shororkaa’uu isaa dubbatanii, Qeerroo akkasumas jaarsoliin biyyaa uummati akka tasgabbaa’u irratti hojjechuu qabu jechuun dhaamsa daarsaniiru.